Ogaden News Agency (ONA) – Siminaar lugu soo bandhigay khayraadka Ogadenya oo ka socda Perth
Siminaar lugu soo bandhigay khayraadka Ogadenya oo ka socda Perth
Waxaa shalay oo taariikhdu tahay 5/1/2014 lagu soo gabagabeeya siminaar aad u qiimo badan oo loo qabtay jaaliyada ogaadeeniya ee galbeedkaAustraliasiminaarkaasoo uu soo diyaariyay halgame shugri shafeec oo ka yimid magaaladaSydney. Abaarihii 4 galabnimo ayuu gudoomiyaha jaaliyadaPerthhalgame Asad Cabdulahi uu furay siminaarka isagoo u mahadceliyay dhamaan xubnihii ka soo qayb galay siminaarka war bixin kooban ka soo jeediyay. Intaa ka dib waxaa wacdi diiniya ka soo jeediyay sheekh Cabdiqaadir oo faray dadkii meesha joogay ka cabsiga Ilaahay wuxuuna ugu baaqay xubnihii jaaliyada inay garab isgarab taagaan halganka gumaysiga lagaga xoraynaayo dalka Ogadenya ay JWXO hogaaminayso.
Intaa ka dib waxaa lagu soo dhaweeyay hagame aqoonyahan Shugri Shafeec oo guda galay siminaarkii loo balansanaa isagoo salaan iyo mahadcelin uu soo jeediyay jaaliyada sidii qiirada iyo xamaasada lahayd ee galbeedkaAustralialoogu soo dhaweeyay. Ka dib ajandihii siminaarka ayuu ka sheekeeyay oo ka koobnaa waxaan anaga iyo Itobiya isku hayno, waxay ka damacsantay Ogadenya iyo say udoonayso inaan noqono umad waa dhulka dagi jirtay lana tirtiray, ujeedooyink ay Ogaadeeniya iskugu dhajinayso oo ah inay u hesho jiilalka dambe ee Itobiya dhul dihin oo kheeraadku ceegaago kuweenana ay hungoobaan ama hambadooda suga noqdaan ama sida dameeraha ama dibida la rarto ama beerahaad lahayd lagu fasho noqdaan. Gumaysigu markuu xisaabtamay wuxuu is-tusay dadkiisii oo badanaya iyo buurihii uu daganaa oo xaalufay.
Wuxuu halgamuhu si qoto dheer u sharaxay inuu baaxadda dhulka Ogaadeeniya yahay sadex meelood meel dhulka Itobiya loo yaqaa, wuxuuna si waafiya u soo bandhigay cadadka dadka ku nool, wuxuuna halkaa jaaliyadii ku tusay qodabada dastuuurka gumaysiga ee qoraya in dhulka Itobiya ay dawladu leedahay, in muwaadinka Itobiyaanka uu xaq u leeyahay inuu ku noolaado meeshuu doono oo Itobiya ka tisan. Wuxuu halkaa aad ugu iftiimiyay inay sideetan iyo sideed milyan oo qof ay diyaar u yihiin sidii daadka inay u jiidhaan dhowr iyo tobanka milyan ee shacabka Ogaadeeniya ee Ilaahay ku manaystay dhulkan dhan walba ka dihin. Wuxuu raaciyay waxaad arkaysaa qaar badan oo kala garan wayay waxa loo gumaysan oo ku odhanaya maxaa naga maqan laami baa ladhisay, cisbitaal baa la dhisay.
“War hadaad halgami waydo inaad calfan baaba la hubin.” ayaa kamid ahaa erayadii halgame Shugri.
Anigoona Halkan ku soo koobi karin macluumaadkuu siminaarki xambaarsanaa ayaa wixii iigu cajiibka badnaa waxaa ka mid ahaa inuu dhamaan dhulka Ogaadeeniya gaas iyo saliid ceegaato qiyaas 360000 Km2 uu gumaysigu block block u xirtay oo shirkada caalamiya ama ku iyagu leeyihiin u diyaar garaysan yihiin say ula soo bixi lahaayeen.
Macluumaadka maskaxdayda ka sii guuxaya ee halgamuhu madasha ka jeediyay waxaa ka mid ahaa; war laga soo wariyay sadexdii Diktaatoor ee gumaysiga Itobiya isaga danbeeyay. Xayle Salaase inuu barlamaankiisa ugu qudbadeeyay Itobiya shidaal bay hesahay oo Ogaadeniyaa laga helay wayna noo xaqiijiyeen shirkadihii baadhayay. Wuxuu ku daray oday balabaad ahaa oo Xayle Salaase la kulmay inuu ku yidhi Xayle; “Maxaan kuu qabtaa?” Odaygiina ayaa ku yidhi qori lixle ah I sii. Kuna celiyay “Maxaan kuugu daraa?” Odaygiina yidhi isagoo buuxa. Waana xiligaa uu barlamaankiisa ugu bishaareenayo shidaalkii odayga qori iyo xabadihiisa I sii. Waxaa taa xigtay buu yiri halgamuhu Mingiste inuu isna yidhi Itobiya waxay ka mid noqon wadamada shidaalka dhoofiya waana 1984. Isla baarlamaanka ayuu sidaas ka sheegay. Wuxuu intaa ku daray in habeenimadii telefishinka gumaysigu uu baahiyay Mingiste oo gaas ku gacmo maydhanaya suu dadkiisa u tuso xaqiiqda hadalkiisa. Intaa waxaa dheer in Meles uu isna shaaciyay sanadkii2010 inshidaalka la soo saaraayo. Uma baahno in la sii faahfaahiyo ayuu yidhi, oo waxaad ogaydeen in macal saamahoodii iyo oodahoodii ay la wada yimaadeen, wixii ka dhacayna la wada ogaa. Macluumaad xaqiiqa ah ayuu halgamuhu u ifiyay xubnihii siminaarka joogay taasoo ay jaaliyaduna ka faaiidaysteen iyadoo waxyaalo dahsoonaanaa la daahfuray.
Ugu dambayntii waxaa lagu balamay in siminaaarkani sii socdo wacyi galinta bulshadana la sii balaadhiyo halgankana la sii dardar galiyo ilaa aynu ka higsanayno xornimo taama
mansha alah khayr alaha hasiiyo halgamaha siminaarka qabtay iyo kuwa looqabtay iyo dhamaan inta taageersan halganka xaqa ah ee umada loo wado waxaan ilaahay kabaryaynaa inuu noocalfo gaalka xuna naga dulqaada isagaa awood lehe amiin